Dhagayso:- Soomaaliland oo ka Hashay Masuuliyiin ka tirsan Maamulka oo lagu dilay Gobolka Sool | Puntland Vision
Dhagayso:- Soomaaliland oo ka Hashay Masuuliyiin ka tirsan Maamulka oo lagu dilay Gobolka Sool
Somaliland ayaa ka hadashay shil Habeen hore saqdii dhexe ka dhacay gobolka Sool oo masuuliyiin ka tirsan ay ka soo gaareen dhimasho iyo dhaawac.
Dhanka kale warar madax banaan Ayaa Sheegaya in Habeen hore saqdii dhexe masuuliyiin ka tirsan Somaliland oo watay labo gaari ay si khalad ah uga soo dul dhaceen mid kamid ah fariisimaha ciidanka Puntland ee gobolka Sool, kadibna ay damceen in ay cararaan balse gaari kamid ah uu Halkaasi Ku Rogmaday.
Gaariga Rogmaday waxaa ku dhintay Saleebaan Cabdi Caatay oo ahaa taliyihii ciidamada Somaliland ee aaga Taleex, halka uu dhaawac culus soo gaaray gudoomiyihii Taleex ugu magacownaa Somaliland oo lagu magacaabo Saleebaan Food Xaaji Diiriye.
Sidoo kale gaariga baxsaday waxaa saarnaa masuuliyiin ka tirsan Somaliand oo uu kamid ahaa gudoomiyihii gobolka Xaysimo ee Somaliland ugu magacownaa oo lagu magacaabo Xiir iyo saraakiil kale.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo laga cabsi qabo dagaal mar kale ku dhexmara Puntland iyo Somaliland gobolka Sool oo ay ku muransan yihiin gacan ku heyntiisa